Igbo, John: Lesson 002 - Ihe kachasị mkpa na okwu nke okwu tupu ejupụta (Jọn 1:1-5) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 002 (The word before incarnation)
1 Na mbu ka Okwu ahu diri, Okwu ahu na Chineke dikwara, Okwu ahu buru kwa Chineke.
Mmadụ na-egosipụta echiche ya na ebum n'uche ya site n'okwu ya. Ị bụ ihe ị na-ekwu. Okwu gị bụ nchịkọta nke onye gị na ngosipụta nke mmụọ gị.N'okwu dị elu, Okwu Chineke na-egosipụta onye bụ chi ya na ike ya niile na-arụsi ọrụ ike n'Okwu ya e doro nsọ. N'ihi na ná mmalite, Chineke kere eluigwe na ụwa site n'Okwu ya dị ike. Ndien ke ini enye ọkọdọhọde ete, "Yak," enye ekedi. Ruo taa, ike nke Chineke ka na-arụ ọrụ n'okwu ya. Ị ghọtara na ozioma nke dị n'aka gị jupụtara ikike nke Chineke? Akwụkwọ a dị ike karịa bọmbụ hydrogen niile n'ihi na ọ na-ewepụ ihe ọjọọ n'ime gị ma na-ewuli gị elu n'ime ihe dị mma.
Ihe nzuzo kachasị n'ime okwu ahụ bụ "okwu ahụ," nke pụtara na ozioma Jọn, bụ na n'asụsụ Grik o nwere ihe abụọ. Nke mbụ bụ: ume nke na-ebu ụda nke si n'ọnụ pụta. Nke abụọ bụ: nwoke, onye ime mmụọ. Uzo okwu abuo a di n'asusu Arabic site na okike nke ngwaa nke nebe okwu ahu, ma obu nwoke ma obu nwoke. N'asụsụ Bekee, ụmụ nwoke abụọ na-eto eto na ụmụ nwoke na-asọpụrụ ha, dịka e gosipụtara na okwu ndị e ji mee ihe maka okwu ahụ. Ya mere oburu na onye nkwusa ozioma Jọn kwuru, "Na mbu ka okwu ahu" ma kowawa ya n'amaokwu nke abua site n'ikwu "obu na nmalite", nka negosi gi otu ihe omimi nke onye nke Kraist. O sitere n'aka Nna ya dika okwu kwesiri okwu si n'onu ya puta. Ya mere, Kraist bu nghota nke uche Chineke na echiche ya. Anyị na-ahụkwa ojiji a n'okpukpe ndị ọzọ, ya bụ na Kraịst bụ Okwu nke Chineke na Mmụọ si n'aka ya. Ọ dịghị mmadụ ọ bụla nọ n'ụwa nwere àgwà ndị a dị n'eluigwe, ma e wezụga onye a mụrụ site na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke Mary.Enwe nke Kraist na Betlehem abughi nmalite nke ya, nihi na o sitere na Nna tutu oge nile ma di tutu uwa abia. Ya bu na Kraist di ebighebi, dika Nna di ebighebi ma adigh agbanwe ma dika okwu nke Chineke adigh agbanwe.
Jọn gosiputara ayi ihe di nkpa nke di n'etiti Kraist na Nna ya. O kewapughi ya, dika okwu ahuru nke di anya site na egbugbere ya ma gbafuo n'elu. Ma Kraist nọnyere Chineke wee n nime ya. Okwu ahụ "na Chineke" pụtara n'asụsụ Grik na okwu ahụ na-aga n'ihu Chineke, na-abanye n'ime Chineke. N'ụzọ dị otú a, a na-eduzi Kraịst mgbe nile n'ebe Chineke nọ. Nduzi a bu ukpuru nke ndi nile amuru site na Mo Nso n'ihi na obu ya bu isi. Ịhụnanya a anaghị achọ nnwere onwe ma ọlị, mana ọ na-anọgide na-eduzi ya na isi ya ma banye na ya.Chineke ekeghi Kraist site na ndi nadigh site na okwu ya dika ihe nile ekere eke, ma Okpara di nime onwe ya Okwu nke n'eme ihe n'ebube nke Nna ya n'onwe ya. Ná ngwụsị nke amaokwu mbụ a, anyị na-achọta akara okwu ahụ dị oke ama na Okwu ahụ bụ Chineke n'onwe ya. N'ụzọ dị otú a, onye ozioma John na-agwa gị na amaokwu mbụ nke ozioma ya na Kraist bụ Chineke si n'aka Chineke, ìhè si n'ìhè, ezi Chineke sitere n'aka ezi Chineke, a mụrụ ma e keghị ya, otu ihe dị mkpa na Nna ahụ, ebighi ebi, dị ike, dị nsọ na ebere. Onye ọ bụla nke na-ekwupụta na Kraist bụ Okwu Chineke ga-ekwenye na okwu a banyere chi ya.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, anyị na-ehulata n'ihu gị n'ihi na gị na Nna gị nọ tupu afọ niile, na-eduzi ya mgbe niile. Nyere anyi aka ka anyi ghara inwe onwe gi n'ebe gi no, kama na anyi na-enye onwe anyi ndu Chineke mgbe niile ma nogide na ihu ya n'anya. Anyị na-ekele gị, Onyenwe anyị Jizọs, n'ihi na i ji okwu ndị a na-aghọta aghọta bịakwute anyị na ozioma gị, ka ikike gị wee pụta ìhè n'ime anyị site n'okwukwe site n'Okwu gị.
Gịnị bụ okwu ahụ e kwughachiri na amaokwu mbụ nke Jọn 1 na gịnị ka ọ pụtara?